HomeAfaan OromooGaaffiin OPDO Gabaan Lafaa Fi Manaa Maaliin Oolee Qofa?
Damee Boruu: Sadaasa 19, 2020
OPDOn garaa ishee mataa ishee irratti baateetti deemti. Dhalli nama yaroo sammuu mataa isaan yaadee waan nagaa biyyaa fi dhaloota boruuf tahu bu’ura ka’ee hojjetu OPDOn achi hin jirtu. Bakki OPDOn itti argamtuu fi itti gaggabdu bakka qabeenya uummataa saamanii fi gabaa mi’aa keessatti gurgurannii bu’aa tulatan qofa jirti. Bara kana bu’aa gugguddaa kan qabu lafa Oromoo fi kondominyam dalaaluu dha.
OPDOn biyyan bulcha jettee yaroo biyyaa gurguraa jirtuu fi Uummata Oromoo, tumaa, hidhaa fi ajjeessaa wagga soddomaa mataa isaa irra teessu maaliif Ummatni Oromoo obsa godhateef? Uummatni dammaqe cunqursaa, dhidhitaa fi saamiinsaaf obsa hin qabu. Uummatni Oromoo akka sabaatti dammaqee jira jechuun baayye ulfaataa dha. Anis jecha Dr. Gammachu Rudaa “Oromoon ni wareere malee, hin dammaqnee” kan jedhe wajjin hirmaachuuyookan soorachuun fedha.
Namni wareere waan hojjetu hin beeku. Samuun isaa karaa sirrii fi qindaa’een yaadee murteesse bakka hojjechuu danda’u irra hin jiru. Yoo sammuun yaaddoo qabaate utuu tibibiruu hallaayyaa seenuu danda’a yookan gufuutti of buusuun ni mala. Namni dammaqee jiru garuu ilaaltee ejjete. Gufuu of duratti ilaale tarkaanfata. Balaa hunda irraa of tiksa. Yoo damaqee jiraate Sabni Oromoo maaliif akka sabaatti ka’ee rakkoo isaa furachuu dadhaba? “Uummatni Oromoo yoo ka’e humna waraana Itoophiyaa miti kan AFrikaa iyyuu cabsuu hin danda’u jedhee kan dubbate” diina isaa Malasaa Zenawii ture.
OPDOn garaan waan yaadduuf bara dheeraaf janja’aa jirti. Bara TPLF nuyi ergamaa dha malee aangoo hin qabnuu jettee waakkachaa kan ilmaan Oromoo adamsu, hidhu fi ajjeesu adda duraan OPDO ture. Qabeenya Uummata Oromoo kan saamuu fi saamsisu OPDO akka tahe beekamaa dha. Uummatni Oromoo akka hin dubbanne, akka hin iyyane akka hin ijaaramne kan ukkaamsee bokoksee qabee jiru OPDO dha. Uummatni Oromoo dhiiga ilmaan isaan waraana Wayyaanee irraa kaasee aangoo dabrsee keneef ka’e waggaa sadan darban kana keessa maal argachaa jira?
Waggaa sadan darban kana keessaa dhumaatii fi salphinni Uummata Oromoo irra gahe seenaa Uummata Oromoo keessatti takkaa dhaga’amee kan hin beekne. OPDOn Mootummaa taatee Uummata Oromoof dhaabbachuu miti Uummata Oromoo wajjin jiraachufuu dandeettii fi beekumsa hin qabdu. OPDOn xancha Uummata Oromoo gidirsaa jiru. Utuu Uummata Oromoo lafaa irraa dugugdee balleessaa jirtu, aangoo Uummatni Oromoo dhiigaa ilmaan isaan fidee ishee badhaasse nafxanyootaa dabarsitee laatte. Yaroo ishee gatiin lafaa fi manaa meeqaan oolee jala deemuu malee nafxanyoonni Mootumicha dhunfaatanii har’a waraana lafa deefanaa akka oofaa jiran hin agartu.
Uummatni Oromoo mootummaa kijibaa illee taatu hin qabu. Shimalis Abdiisaa kootii Kononeel Abiyi baachuu dhiisi maqaa prezedaantii Oromoo kan mogaafame garaa guddaa waan qabuuf qofa. Akka karkaroo ilkaan afaan guutatee hoomocha tufaa yaroo dubbatu arguun nama jibisiisa. Sarichi gaafa Haacaaluun du’e awwaala kabjaa qabu illee dhowwatee hoomocha afaaniin tufaa Shanee fi TPLFitu ajjeesse Haacaluu jedhee nama duratti alba’e. Haacaaluun goota ilmaa Oromoo fayyaa isaa miti reeffi isaa iyyuu sodaatamu. Kan bade harkaa saroota warra garaan yaaduu harkatti lubbuun isaa darbuu dha.
Uummatni Oromoo adda duran dhiiga Haacaaluuf warri itti gaafatamu Abiyi Ahmed, Shimalis Abdiisa, Adenechi Abebee fi Takalee Uumaa akka tahe beeka. Guyyaa seeraa fi seenaan gaafatamtan dura Uummatni Oromoo isin gaafachuuf jira. Haacaluu ajjeessuu keessaniif namni Oromoo dhiifa isnii godhu hin jiru. Isa amma har’a nyaatan hundaa ni balqamtu. Dr. Tadasaa Qana’aa maaliif Haacaaluuf Universitii Amboo keessatti siidaa Haacaaluuf dhaabe jettanii prezedanttii Universitii Amboo irraa kaasuun ragaa dabbalataa Haacaaluu ajjeessuu keessanii mirkaneessuu dha. Cubbuu keessan itti daddabaladha gaafa guyyaan keessan gahu daftanii boola seentu.
Warri mootummaa naannoo qabu lafa deebifachuu waraana oofa. Yoo Tigray cabsinee warri hafe” garbuu” jedhe ilmi nafxanyaa tokko. Akeekni nafxanyootaa biyyaa afaan, amantaa, alabaa, aadaa fi seenaa tokko qabdu Itoophiyaa Amhaaraan bultu ijaaruuf geeraraa jiru. Utuu OPDOn bilxiginaan kan keenya jettu nafxanyoonni irraa fudhatanii RIB lafa deebifachuuf waraanatti bobbaasanii jiru. Humni RIB kun kan mindaaf bulu malee kaayyoo fi akeeka RIB kan hin qabne Oromiyaa keessatti kan daa’imaa fi dubartii, jaarsaa fi jaartii ajjeessaa fi dubartii gudeeda shiftaa diigamee faca’uu qabu. Tigray deemee irbaata rasaasaa tahuun isaa akka kaayyoo fi akeekaa daangaa fi uummata biyya isaa eguu hin qabne agarsiisa. Humni ashakara mootumaatti malee kan biyyaatti jedhame kan itti boonamu miti.
Har’a qabeenya Uummata Oromoo itti ejjetee bakka TPLF bu’ee kan saamaa jiru warra nafxanyaatti. OPDOn inni of ishee saamtuu fi saamsiftu itti xiqqaatee Uummata Oromoo waraana isa hin ilaalleef ilmaan isaa fi qabeenya isaa akka gibira baasuu dorsisaa fi jeeqaa jirti. Bakka dandeessu itti qabeenya uummataa horii callaa, ree’ee, hoolaa, sawaa, gala waraanaaf gummaachina jette humnaan saamaa jirti. Waraanni kun Uummata Oromoo gaaga’ama malee bu’aa fidu tokko hin qabu. Har’a yaroo waraanni irra salphatee jiru kana Uummatni ka’ee OPDO maaliif of irraa hin ari’u? Uummatni Oromoo na gahe jedhee gurmuun ka’ee yoo of irraa haleele kan jala dhaabachuu hin dandeessu.
Rakkinni Uummata Oromoo karaa tokko naaf gala. Warra garaaf bitamuu fi bulutu itti baayyachaa jira. OPDOn akka nama bituun afuura baafachaa jirtu ifa jira. Warri bitamuu horicha fudhatee utuu uummataa isa wajjin dhaabbatee rakkina hin qabu. Namoota uummataa fi waan guddaa hojjechuu danda’an horiin biteen laamshesaa(paralyze) jirti. Warri kun artistoota, abbotii gadaa, abbootii aamant fi manguddotaa hawaasa keessatti bakka guuddaa qaban dabalata. Horii saamaa jirtu kanaan lubbuu ishee jiraachisuu malee hojiin hoomishaa fi guddinaa biyyaaf hojjetamu dhaabbatee jira. Manni barumsaa, mana waldhansaa kan fakkaatan hin ijaaraman. Karaan bahu tokko hin jiru. Gibiraa yookan qaraxni uummatni baasu OPDO jiraachisuuf xiqqaatee qawween nama saamaa jirti.
Bara Haayile Selaasee Uummatni Oromoo maqaa lafaan hiyyumaa guddaa keessa waan seeneef qabsoofne jigsuuf dirqamne. Bara Dargii kan caalu dhufee uummatni keenyaa ilmaan isaa gibira baasuu eegale. Bara Wayyaaneen Eritreaa wajjin wal lootu illee akkuma kana ilmaan isaa gibiraa baasuun itti fufe. Haalli kun uummata keenyaa aadaa tahe har’a OPDOn mootummaa bilxiginaan qaba jette lola Amhaarri lafa deebifachuuf waraana baneef ilmaan gibira guuraa jirti. Waan waraanan ijaarameef Mootummaan Impaayeera Itoophiyaa waraana malee jiraachuu hin danda’u. Uummatni Oromoo yoo kutatee ka’e Impaayeera of irraa cabse malee nagaa hin argatu.
Waan gad fageessine hubachuu qabnu qawwee malee bilisummaan akka hin jire dha. Uummata Amhaaraa Mootummaa fi Mana amantii isaanitu hidhachiisa. Uummata Oromoo irra isa qabu iyyuu mootummaatu hiikachiisa. Kanaafuu mootummaa tokko qabnee jennee tahuu hin qabnu. Uummatni Oromoo mootummaa hin qabu. Kan isaa baasuu meeshaa lolaa qabu hundaan fayyadamee kaabinee fi kaadiree OPDO mandara keessa deemtee isa rakkistu garaa jabeenyaan haleelee of keessaa baasuu dha. Gargaarsa WBOf malu hundaa hatattamaan dhiyeessee akka daddaffiin guddatu gochuun dirqama guddaa gatiitti Saba Oromoo gubaa jiru.
Kan ittiin bulu Mootummaa Cehumsaa Biyoolessa Oromiyaa wal tahee ijaarachuun yaroon isa amma. Kana malee malli hin jiru. Bara baraan mataa qabanee boo’uun haa dhaabbatu. Qorqalbii injifanno horachuun qabsoo keessatti barbaachisaa dha.Yaroo hundaa midhamuu fi mo’amuu himanaa (victim mentality) keessaa baane diina keenya mo’uu fi badachuu himuu qabana. Jecha WBO keessa kan baayyee garaa koo na ciibsuu diina uummata keenya adabnee jirra jecha jedhu. Toko tokkoon Oromoo akka Leenca WBO barooduu fi garmaamuu qaba.